Echi ị nwere ike ịchebe Samsung Galaxy Fold | Gam akporosis
Echi ga-amalite tupu ndoputa nke Galaxy Agbo, mpịachi mobile nke Samsung
Samsung nwere ụbọchị ọzọ dị mma echi site na imeghe ndoputa nke Galay Fold, mobile mpịachi ya nke karịrị $ 2.000 na nke na - efu nnukwu ọnụ ahịa teknụzụ, mana nke na - ebu nke kacha ọhụrụ.
Ọ bụ ọtụtụ afọ nke ntule gburugburu South Korean ika mpịachi mobile, yabụ echi ndị Fans ga-enwe ike ịmalite ịme ndokwa maka ịnwe ekwentị ahụ na-agbatị na nke ahụ nwekwara ike ịghọ mbadamba.
Ọ ga - abụ na Eprel 26 mgbe ọ ga - eme mmalite ya wee bido rute ndị ọrụ bido echi mee ndokwa. A ekwentị mkpanaaka gafere puku dollar abụọ na nke ahụ nwere ike gbaa akwụkwọ site na otu Samsung peeji nke.
Oge obi uto nke ndi Korea jiri ndu nke a na-adịbeghị anya gosipụtara ya igwefoto na-agbanye ihu ma ọ bụ azụ dabere na ihe anyị chọrọ see selfie ma obu foto kwesiri. Ihe dị iche iche banyere ndoputa Samsung Galaxy Fold bụ na ị ga-akwụ ụgwọ tupu oge eruo, ọ bụ ezie Anyị amaghị nke ọma, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị ga-echere n'ahịrị ma si otú a nata ekwentị mgbe ọ dị njikere.
Ma ọ bụrụ na anyị nwere ike iche na a gaghị enwe ọtụtụ ndị dobe $ 2.000 gi, n'ezie anyị na-ezighi ezi, n'ihi na e nwere ọtụtụ ndị na-achọ mgbe niile iji nweta ihe kachasị ọhụrụ na aka, na-atụ anya Huawei na ụzọ ọzọ dị ka ekwentị mpịachi, Samsung nwere ihe nke ya iji bụrụ otu n'ime ihe kachasị mkpa nke ọchịchọ ugbu a na teknụzụ.
Thatbụ na ọ nwere ike, Ogige Galaxy ahụ ga-adị maka ịzụta n'ịntanetị na Eprel 25 ma echi ị nwere ike ịme ndoputa. Echere na na Eprel 26 ọ ga-adịrịrị na ọ ga-adịrịrị gị ka ị lelee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Echi ga-amalite tupu ndoputa nke Galaxy Agbo, mpịachi mobile nke Samsung
Tower emebi bụ kpam kpam mbanye anataghị ikike & Mgbapu n'ihi na gị gam akporo mobile
Huawei Y5 site na 2019, leaked atụmatụ nke Huawei ọhụrụ ọnụ ala ekwentị